almucalimi | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Sheekhu waxuu sii socdaba waxuu gaadhay heer sare ilaa uu ka daalacday Kitaabka ”Almuqhni” ee Ibnu Hishaam, waxuuna daalacadaas wada muddo sannad u dhow.
Taariikhdu markay ahayd 1341hj ayuu imaam u safray Hindia waxuuna joogay muddo 30sano ah, kadib ayuu usoo laabtay Mekkah ,waxaana loo magacaabay amiinka Maktabada Xaramul makkiy.
Sheekhu waxuu ijaaza ka helay Sheekh la yidhaahdo Cabdil Qadiyah Muxamed Sidiiq Alqaadiri oo ah sheekh kulyada xadiiska ee Jaamactu Cuthmaaniyah oo ku taal Xeydar-abaad ee dalka Hindia.Ijaazaduna waxay ahayd Sheekhan kutub dhawr ah ayuu ku siiyay isnaadkiis ah. Kutubta uu ijazada ku helay waxay kala yihiin:
Sheekhu waxay geeridu u timid isagoo weli ka ah amiin/secretary maktabada xaramul Makkiy. Welina uu ku jiro kutub tasxiixin iyo weliba inuu sunadda u adeego raddina ku sameeyo ehlubidaa iwm. Waxuu Ilaahay swt oofsaday aroor khamiis ah oo ku soo tukaday salaadi subax Masjidul xaram kadibna uu ku soo laabtay maktabada, taariikhduna waxay ahayd 6dii bisha Safar 1386hj. Cimrigiisuna qiyaastii waxuu ahaa 73sano inuu ahaa.